Fampiharana IPad ho an'ny informatika (Fizarana voalohany) | Vaovao IPhone
Fampiharana IPad ho an'ny mpahay siansa informatika (fizarana voalohany)
Zava-misy izany amin'ny fahatongavan'ireo fitaovana iOS eny an-tsena amin'ny maha detonatoran'ny Internet finday azy, iray amin'ireo sehatra matihanina nahazo tombony indrindra dia ny "Teknolojian'ny fampahalalam-baovao", satria na inona na inona andraikitsika momba ny fanohanana, ny mpandahatra fandaharana, ny mpamorona tranonkala, ny mpitantana ny tambajotra, ny angona angovo, ny rafitra na izay sampan'ny siansa amin'ny solosaina, tsy azo lavina fa manana ny tanantsika iPad afaka miantehitra amin'ny fitaovana mahasoa izay amin'ny tranga maro aza isika dia manolo ny solosaintsika.
Ho an'ity, tsy ampy ny manana iPad fotsiny, fa tsy maintsy manana ny rindranasa mety ianao vao afaka manatanteraka asa lavitra, manararaotra ny fivezivezena sy ny fifandraisana amin'ireo tamba-jotra sy internet amin'ny takelaka misy anao, izay anolorako ny tapany voalohany amin'ny lisitra iray an'ny Fampiharana iPad ho an'ny mpahay siansa amin'ny solosaina izay azo ampiasaina amin'ny lahasa samihafa izay azo ankinina amintsika ao anatin'ny departemanta solosaina na rafitra.
2 Koder Code Koder
3 FTP On The Go Pro
4 avy hatrany
Na eo aza ny tsy fisian'ny rindrambaiko haingo ho an'ny iPad, Speedtest Mijanona a dia tsy maintsy amin'ny fitaovana finday misy anao satria miaraka amin'ity fitaovana ity dia ho haintsika ny hafainganam-pandehan'ny fifandraisanay data na Wi-Fi na 3G, mampiasa fotodrafitrasa fanandramana manerantany Speedtest.net.
Ny interface dia mampiseho ny fandefasana sy ny famoahana ireo sary amin'ny fotoana tena izy ary ny valiny dia voatahiry eo an-toerana sy amin'ny Internet ihany koa hahafahana mizara azy ireo amin'ny alàlan'ny mailaka ary manondrana azy ireo amin'ny rakitra CSV aza.
Ny fandrefesana dia azo atao amin'ny kbps, Mbps ary kB / s, ankoatry ny famelana anay hisafidy ny mpizara izay tianay hanaovana fitsapana haingana, manome anao lisitr'ireo mpizara akaiky ny toerana misy anao.
Speedtest - Fitsapana hafainganam-pandehamaimaim-poana
Koder Code Koder
Tsotra fotsiny a mpamoaka kaody izany dia ho afaka hamoaka mpandrindra amin'ny olana mihoatra ny iray. Ary na dia tsy ny safidy tsara indrindra aza ny fanoratana kaody amin'ny klavier virtoaly an'ny iPad (fotsiny fa manana klavier Bluetooth ianao), tsy maninona mihitsy ny manana an'ity karazana fitaovana ity amin'ny toe-javatra maika.
Koder manana ny safidy ianao hahitana sy hisolo ny ampahany amin'ilay kaody, topi-maso mialoha ny browser mba hahafahanao mahita ny kaody loharano, safidy fanampiny eo amin'ny fitendry (ampio fanalahidy ampiasain'ny programmer: fitanisana, famonoana, fonosana sns.), fifandraisana amin'i fisie lavitra avy amin'ny FTP, Dropbox, iDisk na fitehirizana eo an-toerana miaraka amn'ny mpikaroka rakitra azy ary mazava ho azy fa fanohanana ny kitendry Bluetooth ivelany.
Ilay ho ahy dia ilay mpanjifa FTP tsara indrindra amin'ny iOS Izy io dia mitondra ao amin'ny kinova PRO misy interface namboarina ho an'ny iPad, izay na dia 8.99 Euros aza ny vidiny dia mendrika izany. Azontsika atao ny mifandray amin'ny mpizara FTP, SFTP, FTPS rehetra hijerena ireo rakitra notehirizinay, miaraka amin'ny fahafaha-manao amboary rakitra HTML, CSS, JS, PHP, ASP.
Azontsika atao ihany koa ny manafatra rakitra avy amin'ny mailaka na rindranasa rehetra manohana azy ary mampakatra azy ireo mivantana amin'ny mpizara anay, amin'ny fomba toy izany koa mampakatra sary sy horonan-tsary avy amin'ny rool, manala zotra ary mamorona rakitra zip, manonona anarana, mamafa, mamindra ary manova alalana fisie.
Iray amin'ireo tsara indrindra Mpanjifa SSH ho an'ny iPad-nao, miaraka amina endrika sy fampiasa tsara izay ho tonga lafatra ho an'ny mpitantana ny rafitra na ny mpamorona tranonkala mila mitantana lavitra ny mpizara.
Ny Prompt dia manana safidy ho an'ny fanaingoana lehibe, fanoratadidy, fanatanterahana automatique, fitehirizana zava-dehibe, fahitana mpizara miaraka amin'i Bonjour, ary fanohanana ireo kitendry Bluetooth.
Izy io dia manana fanohanana amin'ny fampidinana ireo rakitra manan-danja DSA na RSA ary fifandraisana maro, hitazona ireo fotoam-pivoriana misokatra hatrany aoriana.
Mpanjifa database MySQL
Ny fikarohanao mpanjifa angon-drakitra izay manarona motera fitahirizam-bokatra roa na maromaro dia mety tsy ho vita mihitsy. Misy ny fangatahana fandraharahana Impathic ho an'ny Access, DB2, Oracle, SQL Server sy ny hafa, na izany aza, amidy mitokana daholo izy rehetra, tsy mora vidy ary farany lavitra mbola tsy lavorary ny asany (izay te hanandrana azy ireo dia afaka mandeha an-tongotra manodidina pejy ofisialin'ny tsy mahay mandanjalanja).
Ka ny iray amin'ireo tsara indrindra fotsiny no horesahiko mpanjifa ho an'ny MySQL, iray amin'ny mpitantana angon-drakitra be mpampiasa indrindra amin'ny Internet.
Con Mpanjifa database MySQL ho an'ny iPad Azontsika atao ny mifandray amin'ny tahiry MySQL hamakivaky ny latabatra, ny fomba fijeriny ary ny atiny, mbola tena fototr'izany ho an'ireo mpampiasa efa ela ny fiasan'izy ireo, fa kosa ho an'ny vonjy maika raha mila miditra amin'ny vaovao voatahiry na aiza na aiza ianao .
Fanazavana fanampiny - Koder, FTP On The Go Pro
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Fampiharana IPad ho an'ny mpahay siansa informatika (fizarana voalohany)
mrtnclzd dia hoy izy:
Net Master / iNet, WiFiPass, WiFi Analyzer, Routerpwn, iWep Pro / WiFi2Me / Mac2WepKey
Mamaly an'i mrtnclzd
Mandeha amin'ny ampahany faharoa aho miaraka amin'ireo sasany
Tamin'ny 16/01/2013, tamin'ny 22:38 PM, Disqus nanoratra:
Mitaky bebe kokoa !! alaina daholo !!
Famerenana: mikrô iRig avy amin'ny IK Multimedia
Ny fampiharana McDonalds no ohatra tsara indrindra amin'ny fikarakarana ratsy ny mpampiasa